Himalaya Dainik » कहाँ गुमनाम छिन् अक्षयकी पूर्व प्रेमिका नायिका आयशा जुल्का ?
कहाँ गुमनाम छिन् अक्षयकी पूर्व प्रेमिका नायिका आयशा जुल्का ?
बलिउडकि चर्चित सुन्दर नायिका हुन् आयशा जुल्का । आज उनै नायिका आयशाको जन्मदिन रहेकाे छ । उनी ४८ वर्षकी पुगिन् । २८ जुलाई सन् १९७२ मा श्रीनगरमा आयशाको जन्म भएको थियो । उनकाे जन्मदिन अवसरमा उनले बिताएका पलहरु खुलाउँदै छाैँ ।
९० को दशककी आयशा चर्चित नायिकामध्येकी एक थिइन् । हिन्दीबाहेक तमिल, तेलुगू र कन्नड फिल्ममा आयशाले काम गरेकी थिइन् । तेलुगू फिल्म ‘नेति सिद्धार्थ’ बाट आयशाले आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन् र बलिउड उद्योगमा उनले कुर्बान फिल्मबाट डेब्यू गरिन् ।
‘खिलाडी’ बाट चम्कियो भाग्यः
आयशा जुल्काको करियरको सफल फिल्ममध्ये एक फिल्म ‘खिलाडी’ थियो । उक्त फिल्म सन् १९९२ मा रिलिज भएको हाे । अक्षय कुमारका लागि पनि यो फिल्म निकै महत्वपूर्ण रह्यो । यी दुबै सेलिब्रिटीको भाग्य यो फिल्ममार्फत् खोलियो ।
त्यसपछि आमिर खानको फिल्म जो जीता वही सिकन्दरमा पनि आयाशा देखिइन् । यो पनि उनको करियरका लागि हिट साबित भयो ।
अक्षय कुमारसँग अफेयरको खबरः
फिल्म खिलाडी सुपरहिट भएलगतै अक्षय कुमार र आयशा जुल्काको अफेयरको खबर आउन सुरु भयो । अक्षय आयशासँग जीवन बिताउन चाहेको पनि बताइन्छ तर आयशा भने त्यतिबेला आफ्नो करियरमा केन्द्रीत हुन चाहन्थिन् ।
यद्यपि, यो कुराको उनीहरुले कहिल्यै पुष्टि गरेनन् । अक्षय र आयशा आफ्नो काममा अत्यधिक मग्न भए त्यसपछि उनीहरुबीच दरार उत्पन्न भएको खबर पनि आउन सुरु भयो ।
नाना पाटेकरसँग जोडियो नामः
आयशा जुल्का र नाना पाटेकर नजिकिएको खबर सामाजिक संजालमा चर्चा रह्याे । उनीहरुबीचको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन । यी दुई सम्बन्धमा रहेको खबर फिल्म आंचपछि आउन सुरु भएको थियो ।
फिल्म आंच पछि नै आयशा जुल्काको करियरले गति लिन सकेन । त्यसपछि पनि आयशाले अन्य थुप्रै फिल्ममा काम गरिन् । पछि उनले आफ्नो जीवनमा सेटल हुने मन बनाइन् र बिजनेस टाइकून समिर वाशीसँग विवाह गरे । आयशा विवाह पछि फिल्मबाट टाढा भइन् ।
श्रीमानलाई व्यापारमा सहयोग
नायिका आयशा जुल्काको केही समय अघि एउटा फोटो सार्वजनिक भएको थियो जुन उनको स्पा ‘नेस्ट’ को आृेपनिङको क्रममा खिचिएको थियो । आयशा जुल्काको भारतभरी थुप्रै स्पा सेन्टर छन् ।
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिले जिते चुनाव !
बाइडेनले पाए अमेरिकी चुनावी इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत
साम्राज्ञीकी आमा नेहाले गाएको गीतमा साम्राज्ञी र देवांशको रोमान्स (भिडियो)
राजेश हमालको गरिबलाई ३ करोडको जग्गा दानः सुकुम्बासी बने रातारात करोडपती